Kongareeska Maraykanka oo ansixiyey Mooshin ka dhan ah dagaalka Yemen • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Kongareeska Maraykanka oo ansixiyey Mooshin ka dhan ah dagaalka Yemen
Kongareeska Maraykanka oo ansixiyey Mooshin ka dhan ah dagaalka Yemen
Xildhibaanada Golaha Wakiilada ee Baarlamaanka Maraykanka ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyey mooshin cusub oo laga keenay joojinta kaalinta ay ciidamada Maraykanka ku leeyihiin dagaalka ka socda wadanka Yemen.
Mooshinkan ay soo diyaariyeen Xisbiga Dimuquraadiga ee hada heysta kuraasta ugu badan ee golahaasi ayaa sidoo kale lagu cambaareeyey dilkii Suxufi Jamal Khashoggi iyadoo Golahaasi ka codsaday Madaxtooyada Maraykanka ee Aqalka Cad inay jawaab cad ka bixiso kaalintii uu Dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan uu ku lahaa dilkaasi.
Xildhibaanada Dimuquraadiga oo gaaraya 223 oo ay wehliyaan 18 xildhibaan oo ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga ayaa mooshinkan codkooda siiyey, halka ay ka horyimaadeen 177 xildhibaan oo ka tirsan xisbi Xaakimka Jamhuuriga.
Qoraalka Mooshinka ayaa lagu daray labo qodob oo ay u ololeenayeen qaar kamid ah xildhibaanada Jamhuuriga taasi oo irida u furtay in codka loo qaado, waxaa kamid ah qodobadaasi lagu daray in xiriirka sirdoonka Maraykanka & Sacuudiga uu sii socdo iyo in Baarlamaanka kasoo horjeedo Cunaqabateynta Ganacsi ee ka dhanka ah Israel.
Qaraarkan Golaha Wakiilada ayaa loo gudbin doonaa Aqalka Sare ee Senateka ugu danbeyna Madaxweynaha, Donald Trump ayaa la filayaa inuu codkiisa VETO u adeegsado go’aanka Baarlamaanka.
Xukuumada Trump ayaa horey u sheegtay inay sii wadi doonto taageerada ay Sacuudiga iyo Imaaraatiga kasiiso dhinaca dagaalka ka socda Yemen oo ay sheegeen inuu qeyb ka yahay ka hortagida awooda Dowlada Iran oo iyadu taageerta kooxaha Xuuthiyiinta Yemen.